बामदेव पत्नी तुलसाले भनिन् मेरो बुढा गोटी हो ? « Ok Janata Newsportal
बामदेव पत्नी तुलसाले भनिन् मेरो बुढा गोटी हो ?
काठमाडौं । शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने कार्यक्रम तय भएको छ । सभागृहमा सबै चाजोपाजो मिलिसकेको थियो । विप्लवलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले काठमाडौं ल्याउनका लागि हेलिकोप्टरको प्रबन्ध मिलाएका थिए तर विप्लवले हेलिकोप्टरमा आउन मानेनन् ।
विप्लव शुक्रबारै नवलपुरमा सार्वजनिक भए । उनले झापा वि द्रोहका श हिदहरुलाई सम्झिँदै त्यहाँ एक शहिद परिवारको आमाबाट आर्शीवाद लिएर गाडीमा चढे र काठमाडौं आए । उनलाई सुरक्षाका साथ काठमाडौं ल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुक्रबारको कार्यतालिका विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु मात्रै नभइ आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि ठूलो संघर्ष गर्नैपर्ने अर्को कार्यतालिका थियो ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो २ बजेका लागि कार्यक्रम तय गरिएको छ । तर, निर्धारित समयमा कार्यक्रम शुरु हुन सकेन । विप्लवले काठमाडौ पुगेपछि आफ्नो तर्फबाट वार्ता टोलीमा बसेका पार्टीका प्रवक्ता खड्क विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र अर्का नेता नेता उदय चलाउने ‘दीपक’ भेटे । लामो दौडधुपका कारणका उनले केही समय सामाखुसीको एक गेष्ट हाउसमा आराम पनि गरे ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने कार्यतालिका थियो । विप्लव कार्यक्रमस्थल जानुअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पसे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले उनको स्वागत गरे । एकपटक ठट्टा पनि गर्न भ्याए । अबको राजनीतिक यात्रा तपाईं हाम्रो सँगसँगै हुनुपर्छ । त्यसमा विप्लवले केही प्रतिक्रिया जनाएनन् । सामान्य अनौपचारिक बसाइपछि प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव राष्ट्रिय सभागृहमा लागे ।
सभागृहमा नेता, कार्यकर्ताले उनीहरुलाई पर्खिरहेका थिए । त्यहाँ पुगेलगत्तै हलमा प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवको उपस्थित मासले सम्मान गर्यो । कार्यक्रमका सञ्चालक प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जतिसक्दो छोटो मीठो बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए । उनले कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएको क्षमायाचना पनि गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताको लिस्ट लामो थिएन ।
विप्लवको वार्ता टोलीका नेता उदय चलाउने ‘दीपक’ले स्वागत मन्तव्य राखे । त्यसपछि सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । जसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विप्लव समूहका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि विप्लवको बोल्ने पालो आयो, उनले छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राखे । त्यसक्रममा उनले आफू यसै धर्तीमा गाडिने तर विदेशीको सामू नझुक्ने प्रतिवद्धता गरे ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोल्ने पालो थियो । सञ्चालक भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मञ्चमा बोलाउँदा निकै चिल्लो घसे, आजका आकर्षणका पात्रलगायत अरु शब्द पनि खर्चिए । तर, शुक्रबारको आकर्षणमा पात्र विप्लव नै थिए भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्तव्य राखे । उनले बीच–बीचमा हाँसो ठट्टा गर्दै हलमा रहेका सबैलाई मोहित पारे ।
लगत्तै बामदेव निवास भैँसेपाटी पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नु र आफूलाई सहयोग गर्न भन्नु प्रधानमन्त्री ओलीलाई हतारो थियो । त्यहाँको कार्यक्रम सकेर उनी बालुवाटार लागे । केही समयपछि भैँसेपाटी गए । बामदेव निवासमा गौतमकी पत्नी तुलसा थापाले प्रधानमन्त्रीको टीमलाई स्वागत गरिन् । करिब १० जनाको समूहमा प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएका थिए । सामान्य चियापान भयो, शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले निम्तो पनि दिए ।
त्यहाँ देखिएका गजबको दृष्य त के थियो भने गौतम पत्नी तुलसा थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेकी थिइन्, ‘उहाँ नेपाली राजनीतिमा कतिञ्जेल गोटी बन्ने ? उहाँको योगदानलाई पार्टीले किन मूल्यांकन गर्न सक्दैन ? बेलाबखत उहाँलाई सहजताका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ किन ? तर, आजको दिनमा उहाँले कसैलाई साथ दिन सक्ने अवस्था छैन । मेरो परिवारले जहिले धोका पाउने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै सवाल सुनिसकेपछि गौतम पत्नी थापालाई शान्त पारेका थिए । राजनीतिमा नआत्तिन र पर्खिनुपर्ने भनेका थिए । यी सामान्य भलासुकालीपछि प्रधानमन्त्रीको टोली फर्किएको थियो ।